မိုင်းဖုန်း ဆရာတော် မယ်ဆိုင်ဂူသို့ ကြွရောက် ဆုတောင်း မေတ္တာပို့ ကလေးများ အကုန်လုံး ရှိနေသေး? - Yangon Media Group
မိုင်းဖုန်း ဆရာတော် မယ်ဆိုင်ဂူသို့ ကြွရောက် ဆုတောင်း မေတ္တာပို့ ကလေးများ အကုန်လုံး ရှိနေသေး?
တာချီလိတ်၊ ဇွန် ၃ဝ
ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်ဆိုင်မြို့ရှိ ထမ့်လုံခွန်နမ့်ဂူအတွင်း ဇွန် ၂၃ ရက်ကတည်းကပိတ်မိနေသည့် ထိုင်းကလေးငယ်များ အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက် ဇွန် ၃ဝ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီ ၅၉ မိနစ်တွင် ကယ်ဆယ်ရှာဖွေရေးလုပ် ဆောင်ရာနေရာသို့ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ြ<ွကရောက်လာပြီး မွန်းလွဲ ၂ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးခဲ့သည်။ တာချီလိတ်တွင် မြန်မာဘက်မှ တတိယနေ့အဖြစ်ကူညီကာ ဆက်လက်ရှာဖွေလျက်ရှိပြီး ထိုင်းရေတပ်အထူးအဖွဲ့ ခွဲများကလည်း သတ်မှတ်နေရာများကို ထိုးဖောက်ရှာဖွေလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်သည် ဇွန် ၂၉ ရက်ညပိုင်းက ပထမအကြိမ် လာရောက်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သခဲ့ပြီး ယနေ့ဒုတိယ အကြိမ်လာရောက်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ ပထမအကြိမ် ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သအပြီးတွင် ”အကုန်လုံးရှိနေသေးတယ်။ တစ်ရက်နှစ်ရက်နေရင်တွေ့မယ်”ဟု မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီးက ထိုင်းမီဒီယာများကို မိန့်ကြားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ်ဒေသ ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်ဆိုင်မြို့ရှိ ထမ့်လုံ ခွန်နမ့်ဂူ၏ ထွက်ပေါက်ရှိနိုင်ခြေရှိသည့် နေရာများကို အိမ်နီးချင်းမြန်မာနိုင်ငံရှိ တာချီလိတ်ခရိုင်အတွင်း တတိယနေ့အဖြစ် ဇွန် ၃ဝ ရက်က ဆက်လက်ရှာဖွေနေကြောင်းသိရသည်။ ”ကျောက်တောင် ငွေတောင် ဦးကမ္မဋ္ဌာန်းကျောင်းရှေ့က တရားရိပ်သာမှာရှိတဲ့ဂူထဲကို ဒီနေ့ဝင်ရှာတာ ဘာမှမတွေ့ပါဘူး။ ဂူအပိတ် ဖြစ်နေတယ်”ဟု တာချီလိတ်မြို့ ပုန်းထွန်ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရုံးမှ ဦးစိုင်းဆမ်မြင့်က တာချီလိတ်သတင်းအေဂျင်စီသို့ ပြောသည်။
လူငယ် ၁၃ ဦးပိတ်မိနေသည့် ထိုင်းနိုင်ငံ မယ်ဆိုင်မြို့ရှိ ဂူ၏ထွက် ပေါက်မှာ အိမ်နီးချင်းမြန်မာနိုင်ငံ တာချီလိတ်ခရိုင်အတွင်းရှိသည်ဟုယူဆရသဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံဘက်ခြမ်းမှ ကူညီရှာဖွေပေးရန် ဇွန် ၂၈ ရက်တွင် အကူအညီ တောင်းခံလာသဖြင့်ရှာဖွေမှုလုပ် ဆောင်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဇွန် ၂၈ ရက်တွင် ငွေတောင်ဦး ငွေစေတီကုန်းနှင့် ဇွန် ၂၉ ရက်တွင် သီရိရတနာဂူတို့တွင် ရှာဖွေခဲ့သော်လည်း ဂူထွက်ပေါက်လမ်းကြောင်းများ ပိတ် နေသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရ ကြောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံဘက်မှ ကူညီကယ်ဆယ် ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် တာချီလိတ်ခရိုင်အတွင်းရှိ ဒေသတာဝန်ရှိသူများကကြီးကြပ်၍ လိုအပ် သည့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို ပြည်နယ်အစိုးရပံ့ပိုးမှုဖြင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ဒေသတွင်းမှ နယ်မြေကျွမ်းကျင်သူများ အကူအညီဖြင့် ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိသည့်နေရာများကို ထပ်မံရှာဖွေ ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှုများအတွက်အသင့်ပြင်ထားကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် ပြည်ထောင်စုအစိုးရက နိုင်ငံခြား ရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့တို့သို့ ဇွန် ၂၈ ရက်တွင် ညွှန်ကြားလိုက်ပြီးနောက် မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ် တာချီလိတ်ခရိုင်တာ ဝန်ရှိသူများက မြန်မာ-ထိုင်းနှစ် နိုင်ငံနယ်ခြားကော်မတီချင်းချိတ် ဆက်၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ဇွန် ၂၃ ရက် ညပိုင်းမှစတင် ရှာဖွေခဲ့သော ထိုင်းကလေးများငယ် များရှာဖွေမှု ရှစ်ရက်မြောက်နေ့တွင် ရေစီးရေသန်များလျော့နည်းသွားပြီး ရေကျသွားပြီဖြစ်သော မယ်ဆိုင်ဂူအတွင်းရှိ ထိုင်းရေတပ်၏အ ထူးအဖွဲ့ခွဲများသည် သတ်မှတ်နေရာများကို ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နေ ပြီဖြစ်ကြောင်း ထိုင်းတော်ဝင်ရေ တပ်၏ ဇွန် ၃ဝ ရက် နံနက် ၁ဝ နာရီခွဲတွင် ထုတ်ပြန်သော ထုတ် ပြန်ချက်အရသိရသည်။
မယ်ဆိုင်ဂူအတွင်း ကယ်ဆယ် ရေးအဖွဲ့များသည် ဇွန် ၃ဝ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ဂူအတွင်းရေများကို တစ်နေရာမှ နောက်တစ်နေရာသို့ စုပ်ထုတ်ရန်အတွက် အရှည် ၃၆ ပေ နှင့် အကျယ် ငါးလက်မရှိ ရေပိုက် ၈၅ ချောင်းကို သယ်ယူ ခြင်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး လက်ရှိ ရှိနေသောရေများကို အပြီးသတ် စုပ်ထုတ်နိုင်ရန်အတွက် အားသွန်ခွန်စိုက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ ထို့ပြင် ဂူထဲမှလူငယ် ၁၃ ဦးကို မကြာမီရက်ပိုင်းမှာ ရှာဖွေတွေ့ရှိပါက အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအတွက် ကျန်းမာရေးအဖွဲ့များက ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ၊ နိုင်ငံတကာမှ မီဒီယာများစနစ်တကျဖြစ်စေရေး၊ ပိတ်ဆို့မှုများမဖြစ်စေရေးအတွက်လည်း ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကို ဇွန် ၃ဝ ရက် နံနက် ၉ နာရီခွဲမှ စတင် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း သိရသည်။
ဇွန် ၃ဝ ရက်အကူးမှ နံနက် ၉ နာရီခွဲအထိ မိုးမရွာသဖြင့် ဂူတွင်းကျန်ရှိသည့်ရေများကို အဆက်မပြတ်စုပ်ထုတ်နေသဖြင့် ရေ များလည်းကျလျက်ရှိကြောင်း၊ ဂူအတွင်းနှင့်ဂူအပြင်ဖြစ်သော တော တောင်များပေါ်မှ ဂူပေါင်း ၁ဝ ပေါက်ဝန်းကျင်၌လည်း အဖွဲ့များစွာက ရှာဖွေလျက်ရှိကြောင်း၊ ကယ်ဆယ်ခေါ်ယူနိုင်ရန်အတွက် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ လူနာတင်ယာဉ် အသင့်ရှိစေရေးတို့အတွက် တော တောင်အတွင်း ရဟတ်ယာဉ်ဖြင့် ရှာဖွေရေးအဖွဲ့များကလည်း ဇွန် ၃ဝ ရက် နံနက်ပိုင်းမှစတင်၍ ရှာ ဖွေမှုနှင့်အတူ ဇာတ်တိုက်လေ့ကျင့် မှုများပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။ မယ်ဆိုင်မြို့ရှိ ထမ့်လုံခွန်နမ့် လိုဏ်ဂူအတွင်း ဇွန် ၂၃ ရက်ကတည်း ကဝင်သွားသည့် ကျောင်းသားလူငယ် ၁၃ ဦးကို ထိုင်းနိုင်ငံမှတာဝန် ရှိသူများ၊ လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့များ၊ နိုင်ငံတကာကပူးပေါင်းကူညီသူများ ဖြင့် နည်းလမ်းမျိုးစုံသုံး၍ ရှာဖွေ နေဆဲဖြစ်ပြီး ဇွန် ၃ဝ ရက်နေ့တွင် ရှာဖွေမှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင် နေကာ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီး လာ ရောက်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သမှုကို ဇွန် ၃ဝ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီ ၅၉ မိနစ်မှ ညနေ ၄ နာရီကျော်အထိ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကိုဇောင်း(Tachilileik News Agency)
ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်း နာဂျစ်၏ ပါတီဘဏ် ငွေသွင်း ငွေထုတ်များအား ပိတ်ပင် တားမြစ်
ဧရာဝတီ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွင် ကမ္ဘာ့မျိုးသုဉ်းလုနီး အန္တရာယ် ကျရောက်နေသော ကြိုးကြာခေါင်းနီ အ